Fiomanana Alahady 03/05/2015 - Fiangonana FLM Orléans Fiangonana Loterana Malagasy FLM Orleans
Perikopa Jona 2015
Fiomanana Alahady 10/05/2015
Fiomanana Alahady 03/05/2015
> Azo jerena eto (tsindrio)
Fiomanana Alahady IV manaraka ny PASKA_03.05.2015 (pdf)
Alahady 03 mey 2015: ALAHADY IV MANARAKA NY PASKA
Isa.12:1-6; I Jao.3:19-24; Jao.16:5-15; Jao.7:37-39
1 Ary hiteny hianao amin’izany andro izany hoe: Hidera Anao aho, Jehovah ô; Fa na dia tezitra tamiko aza Hianao, dia [Na: Fa tezitra tamiko Hianao, nefa] afaka ny fahatezeranao, ka mampionona ahy Hianao.
2 Indro, Andriamanitra no famonjena ahy; dia hatoky aho, fa tsy mba hatahotra; Fa Jehovah Tompo no heriko sy fidèrako, fa efa famonjena ahy Izy.
3 Koa amin’ny fifaliana no hantsakanareo rano amin’ny loharanom-pamonjena.
4 Ary hiteny hianao amin’izany andro izany ka hanao hoe: Miderà an’i Jehovah, miantsoa ny anarany, ampahafantaro any amin’ny firenena ny asany. Ampahatsiarovy fa efa misandratra ny anarany.
5 Mankalazà an’ i Jehovah, fa asa lehibe no nataony; Ary aoka ho fantatra any amin’ny tany rehetra izany.
6 Miantsoa mafy sy mihobia, ry mponina any Ziona; Fa lehibe ao afovoanao ny Iray Masin’ny Isiraely.
I Jaona 3:19-24
[Ny fahazotoan’ny zanak’Andriamanitra hanao ny sitrapon’ ny Rainy sy hifankatia amin’ny namany, ary ny fahatokiana ananany]
19 Izany no hahafantarantsika fa avy amin’ ny marina isika sy hampahatokiantsika ny fontsika eo anatrehany,
20 na amin’inona na amin’inona no anamelohan’ny fontsika antsika, satria Andriamanitra lehibe noho ny fontsika ka mahalala ny zavatra rehetra.
21 Ry malala, raha tsy mba manameloka antsika ny fontsika, dia manana fahasahiana eo anatrehan’Andriamanitra isika.
23 Ary izao no didiny, dia ny hinoantsika ny anaran’i Jesosy Kristy Zanany sy ny hifankatiavantsika araka ny didy nomeny antsika.
[Ny nilazan’i Jesosy ny amin’ ny hahatongavan’ny Mpananatra, sy ny hihaviany indray]
5 Fa ankehitriny mankany amin’izay naniraka Ahy Aho, ary tsy misy aminareo manontany Ahy hoe: Hankaiza Hianao?
6 Fa satria nilaza izany taminareo Aho, dia vonton’alahelo ny fonareo.
7 Fa Izaho milaza ny marina aminareo; mahatsara anareo ny fialàko; fa raha tsy hiala Aho, dia tsy ho avy atỳ aminareo ny Mpananatra [Izahao 14.16] ; fa raha handeha Aho, dia hirahiko ho atỳ aminareo Izy.
10 ny fahamarinana, satria mankany amin’ny Ray Aho, ka tsy mahita Ahy intsony hianareo;
11 ny fitsarana, satria ny andrianan’izao tontolo izao dia efa voatsara.
13 Fa raha tonga ny Fanahin’ny fahamarinana, dia Izy no hitari-dàlana anareo ho amin’ny marina rehetra; fa tsy hiteny ho Azy Izy, fa izay ho reny dia holazainy avokoa; ary ny zavatra ho avy aza dia hambarany aminareo.
14 Izy hankalaza Ahy; fa handray avy amin’ny Ahy Izy ka hanambara izany aminareo.
15 Izay rehetra ananan’ny Ray dia Ahy avokoa, koa izany no nilazako fa mandray avy amin’ny Ahy Izy ka hanambara izany aminareo.
[Ny niakaran’i Jesosy tany Jerosalema tamin’ ny andro firavoravoana Tabernakely, sy ny nampianarany teo an-kianjan’ ny tempoly, ary ny nitadiavan’ny lehibe hisambotra Azy]
37 Ary tamin’ny andro farany, izay andro lehibe tamin’ny andro firavoravoana, dia nitsangana Jesosy ka niantso nanao hoe: Raha misy olona mangetaheta, aoka izy hanatona Ahy ka hisotro.
38 Izay mino Ahy, dia hisy onin’ny rano velona miboiboika avy ao an-kibony, araka ny voalazan’ny Soratra Masina.
39 Ary ny Fanahy, Izay efa horaisin’ny mino Azy, no nolazainy tamin’ izany; fa ny Fanahy [Na: Fanahy Masina] tsy mbola nomena, satria Jesosy tsy mbola niditra tamin’ ny voninahiny.
FLM Orléans – www.flm-orleans.org